काजकस्तानमा देखियो को’रोना भन्दा घा’तक रो’ग: सतर्क रहन सुचना जारी – Sanchar Patrika
July 10, 2020 97
एजेन्सी– संसारभर को’रोना महामारी फैलिरहेका बेला काजकस्तानमा कोभिड–१९ भन्दा पनि झन् खतरनाक प्रकृतिको ‘अज्ञात निमोनिया’ रोग शु’रु भएको बताइएको छ ।पूर्व सोभियत मु’लुक काजकस्तानमा सो रो[ग जुन महिनादेखि शुरु भएको भन्दै त्यहाँस्थित चिनियाँ दूतावासले सबैलाई सतर्क रहन आह्वान गरेको छ ।
‘यो रोगका कारण हुने मृ’त्यु दर को’रोना भा’इर’सले हुने भन्दा बढि छ । काजकस्तानका स्वास्थ्य विभागहरुले यो नि’मो’निया भा’इर’सबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन् तर त्यसको कारण पहिचान अझै हुनसकेको छैन,’ सो दूतावासले त्यहाँ रहेका चिनियाँ नागरिकहरुलाई सचेतनाका लागि जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
चिनियाँ दूतावासले यसलाई ‘अज्ञात निमोनिया’ भनेको छ भने काजकस्तानकै अधिकारी र मिडियाले भने यसलाई नि’मोनिया मात्र भनेका छन् । चिनियाँ दूता’वासले यसलाई फरक ढंग’बाट व्याख्या गर्नुको आधार भने प्रष्ट्याएको छैन ।
दूतावासले त्यहाँका अत्यरउ र एक्तोवे प्रदेशहरु र श्येमकेन्ट शहर लगायतमा त्यस्ता बि’रामीको संख्या जुनको मध्यदेखि ह्वात्तै बढेको जनाएको छ । दूतावासका अनुसार ती ठाउँहरुमा अहिलेसम्म निमोनियाका बिरामीको संख्या ५०० पुगेको र तीमध्ये ३० जना गम्भीर अवस्थामा छन् ।
काजकस्तानमा को’रोना संकट सामना गर्न मार्च १६ मा आपतकाल लगाइएको थियो । मे ११ मा लकडाउन हटा’इएको थियो । तर निमोनियाको समस्या देखि’एपछि फेरि क्वारेन्टिन लगायतका निषे’धा’त्मक व्यवस्था शुरु गरिएको छ ।
त्यहाँका राष्ट्र’पतिले बुधबार विशेष सम्बोधन गर्दै कोभिड–१९ को समस्या नसुल्झिँदै ठूलो संख्या’मा नि’मोनियाका बिरामी देखिएपछि थप ज’टिलता देखिएको बताएका थिए ।
Prevबाटोमा भेटेको पैसा टिप्नु भएको छ ? यस्तो छ धार्मिक परिणाम !
Nextराजेन्द्र र समीक्षाको तीज गीत सार्वजनिक [भिडियाे]